Sharci cusub oo haweenka keli nool u sahlaya in uur lagu abuuro - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Än så länge får ensamstående kvinnor vända sig någon annanstans än till universitetssjukhusen. sawir: Hasse Holmberg/TT
Sharci cusub oo haweenka keli nool u sahlaya in uur lagu abuuro
La daabacay fredag 1 april 2016 kl 11.59
Laga bilaabo maanta waxaa Sweden ka hirgalaya sharci cusub oo haweenka keli nool xaq u siinaya ilmo in lagu abuuro.
Laakiin gobolo badan oo waddanka ka mid ah ayaa haweenka keli nool laga diiday in lagu qoro liiska sugitaanka uur ku abuurka. waxaa ugu wacan gabaabsi dhanka hantida iyo weliba dhabotuska ay tahay in ay raacaan xarumaha caafimaadka oo aan cadeyn, sida ay sheegayaan hosbitaalada waweyn.
- Wax ka badan toban sanno ayaan doonayey in aan ilmo dhalo, dhamaan saaxiibadey carruur ayey wado leeyahiin , ayey tiri haweeney magaceeda lagu soo koobay Anna.
Waxay ka mid tahay haween badan oo tageero ka doonaya xarrumaha caafimaadka si uur loogu abuuro maanta oo uu hirgalay sharci cusub oo u sahlaya haweenka keli nool in uur lagu abuuro. Laakiin markay wacday xarrumaha caafimaadka si ay iskugu qorto liiska sugitaanka waxa loo sheegay in aysan suurtogal aheyn.
Inkastoo sharcigan uu maanta hirgalayo haddana cusbitaallada waaweyn ee dalka ayaa haweenka u diida in ay ku qoraan liiska sugitaanka. Cusbitaalladu waxey leeyahiin waxaan u baahannahey hanti dheeraad ah iyo weliba in la caddeeyo qaabka uu noqonayo haweenkan daryeelka ay u baahan yahiin.
- Waa sahlantahay in sharciyo cusub layska hirgeliyo laakiin meelmarintooda sidaas uma sahlana. Midda ugu darana waxa weeye in haweenka daryeelkan u baahan lagu qoro liiska sugitaanka balse hadowto loo awoodi waaye in lagu gacan siiyo baahideeda ah in uur lagu abuuro, ayey tiri Ann Thurin Kjellberg, oo ah dhaqtar sare oo ka howl-gasha qaybta hooyada iyo dhallaanka hosbitaalka Sahlgrenska sjukhuset.
Sharciga cusub ee manta hirgalaya ayaa baneynaya in haweeneyda keligeed nool iyo haweenka ugxanta ka halaysantahay ee aan uurka qaadi karin lagu abuuro ilmo.
Hans Karlsson, madaxa waaxda caafimaadka iyo daryeelka ururka degmooyinka iyo gobolada Sweden SKL ayaa ujeeda faa'idooyin ku jira laysla mid dhigo haweenka uurka qaadi karin iyo haweenka keligood nool ee doonaya uur in lagu abuuro.
- Talooyinkeena hadda waxay quseeyaan lamaanaha isku jinsiga ah lamaanaha labka iyo dhadiga ah. Hadase waxaan ku dareynaa talooyinkeena in haweenka keli nool loo sahlo uur ku abuurka. Maamulka caafimaadka ee gobolada sidaas oo kale sameeyaan, ayuu yeri.
Mar haddii hosbitaalada waweyn aysan hadda qaabileynin, haweenkan wadada keliya ee u furan waxay tahay goobo kale u doontaan caawinaadaha ay u baahan yahiin tusaale ay u tagaan xaruuumaha cafimaadka ee qaaska loo leeyahay ama dalka dibadiisa.
Anna ayaa iyadu ka rajo dhigtay Sweden in ay ka hesho caawinaad ah uur ku abuur in lagu gacan siiyo.
- Hadey ka suurto-gal tahay halkan markaa uma baahni in aan Denmarka aado. Haddii sharci cusub la hirgeliyey waan in la raacaan oo laga dhigaa mid shaqeynaya, ayey tiri ahweeneydan magaceeda lagu soo koobay Anna.